August 20, 2019 - Book News Madagascar
Polisim-pirenena – Hamafisina ny ady amin’ny kolikoly
Hanatsara ny fomba fiasany ny Polisim-pirenena ao anatin’izao enim-bolana farany izao. Hisy araka izany ny paikady vaovao hapetraka hanatratrarana ny tanjona. Anisan’izany ny ady amin’ny kolikoly. Hamafisina ny ady amin’ny kolikoly Nanatanteraka atrikasa teny amin’ny CCI Ivato ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka omaly. Mifarana androany io atrikasa io ary votoatin’ity atrikasa ity Read more…